Home News Madaxweyne Deni oo gaaray Qardho!
Madaxweyne Deni oo gaaray Qardho!
Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxaa ay gaareen Magaalada Qardho ee gobolka Bari, balse Puntland ay ka dhigtay gobolka Karkaar.
Wafdiga oo ka ambabaxay Magaalada Garoowe ayaa waxaa Garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey Maamulka Gobolka Bari iyo kan Degmada Qardho.
Wararka ayaa intaasi waxaa ay ku darayaan in sababta uu u tagay Magaalada Qardho ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay in Madaxweyne Deni uu tababar u furi doono in ka badan 500 oo askari oo ka tirsan ciidanka Daraawiishta dowlad Goboleedka Puntland.
Madaxweyne Deni ayaa inta uu magaalada Qardho joogo, waxa uu kulamo la qaadan doonaa qeybaha kala duwan ee bulshada iyo Maamulka degmada,isaga oo sidoo kale kormeer ku tegi doono Xarumo ku yaalla Magaaladaas